Liiska Dadka Ay Hillary Clinton U Eersanayso Guuldarradii Doorashada | Somaliland Today
← Ugu Yaraan 24 Arday Oo Ku Dhintay Madarasad Ku Gubatay Dalka Malaysia
Maxkamad Ku Taalla Dalka Spain Oo Su’aalo Weydiinaysa 700 Oo Maayir →
Liiska Dadka Ay Hillary Clinton U Eersanayso Guuldarradii Doorashada
(SLT-Washington)-Ciwaanka quruxsan ee buugga cusub ee Hillary Clinton ee ah “Maxaa dhacay?” ayaa waxaa loo turjuman karaa siyaabo badan.
Waxa uu buugga si faahfaahsan uga hadlayaa doorashadii 2016-ka, wuxuuna ciwaanka muujinayaa la yaabka qabsaday Hillary.
Inkasta oo ay akhristayaasha ku xirantahay hadba sida ay u fasiranayaan waxa buugga ku qoran, haddane Clinton waxa ay buugga iyo waliba waraysiyo ay dhawaantay bixisay ku sheegaysaa faahfaahino kala duwan oo kugu filan in aad fahamto sidii ay wax u dhaceen.
Halkan waxaan kusoo koobaynaa waxyaabaha muhiimka ah ee Hillary u eersanayso in ay ugu guuldaraysatay doorashadii dhacday, taasoo keentay in buugaagta Clinton ay camirayaan qaanadaha iskafaalooyinka dukaamada buugaagta, halka Trump uu ku dangiigsanyahay kursiga xafiiska Oval ee Aqalka Cad.
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionJames Comey agaasimihii hore ee FBI
“Haddii aysan ahaan lahayn farogalintii FBI ee maalmihii ugu dambeeyay, waan ku guulaysan lahayn Aqalka Cad” ayay buugga ku tiri Hillary Clinton.
Mase ahan markii koowaad oo Clinton ay eedeyn dusha uga tuurto Comey, kaasi oo warqad u qoray Congress-ka uu ugu sheegayaa in uu dib u furay dacwaddii fadeexadii emailada ee Clinton. James Comey waxa uu ahaa agaasimihii hore ee FBI-da.
Sheekada ku saabsan in FBI ay dib u fureyso gal dacwadeedka Clinton ayaa waxa ay saxaafadda haysatay muddo todobaad ah, waxana ay ku filnayn in ay dhanka kale u janjeeriso taageerada Clinton loo hayay, sidaasina uu fursad ku helay Trump oo markaas isna haysatay fadeexado kale.
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionVladamir Putin madaxweynaha Ruushka
“Waligay ma malaysan in uu ku dhiiran karo in uu weerar intaas la’eg kusoo qaado dimoqoraadiyadeena inaga oo indhaheena furanyihiin, kadibna ay u suurtoobayso in uusan wax ciqaab ah la kulmin” ayay buugga ku qortay Clinton oo ka hadlaysa farogalinta la sheegay in Ruushka ku sameeyay doorashadii Maraykanka.
Inkasta oo ay dad yar uun ka warhayeen, haddane waxaa jiray caddaymo ku filan oo la hayay sanadkii 2016-kii in Ruushka isku dayayo in uu farogaliyo doorashada Maraykanka.
Hay’adaha sirdoonka Maraykanka waxa ay hoosta ka xariiqeen in Ruushka uu farogaliyay doorashada, doonayayna in xisbiga Jamhuuriga uu ku guulaysto doorashada.
Clinton waxa ay aaminsantahay in xubno ka tirsan kooxda Trump ay wadashaqayn dhexmartay Ruushka si Trump loogu doorto madaxtinimada Maraykanka.
Balse si kasta oo uu Ruushka u farogaliyay doorashada, haddana ma ahayn mid ku filan in uu saamayn ku yeesho natiijada doorashada.
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionBarack Obama madaxweynihii hore ee Maraykanka
“Waxaan is weeydiiyaa ka waran haddii madaxweyne Obama uu dadka kala hadli lahaa taleefishinka 2016-kii, una sheegi lahaa halista ay wajahayso dimoqoraadiyadeena, malaha dad badan oo Maraykan ah ayaa ku baraarugi lahaa halista xiligaas jirtay” ayay buugga ku tiri Clinton oo farta ku fiiqday in Obama uu ka aamusay xogtii uu ka hayay farogalinta Ruushka.
Sida lagu sheegay wararka warbaahintu baahisay, sababta ugu weyn ee dadweynaha wax uga ogaan waayeen farogalinta Ruushka illaa doorasho dhamaato, ayaa ahayd in Obama uusan doonaynin in uu ka hadlo illaa uu ka helayo taageerada Aqalka Congress-ka.
Madaxweynaha ayaa iska aamusay isaga oo ka yaabbanaa in haddii uu talaabo qaado loo arki lahaa in uu dhinac u janjeero.
Clinton ayaa dhaleecaysay hoggaamiyaha aqlabiyadda xisbiga Jamhuuriga ee Aqalka Sare Mitch McConnel oo ay sheegtay in amniga dalka uu ka hormariyay danaha xisbigiisa, maadaamaa uu ka aamusay farogalinta Ruushka.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionTrump iyo Clinton oo ka qaybgalaya dood labadooda dhexmartay
“Kuwa badan oo ka mid ah saxaafadda falanqeysa arrimaha siyaasadda, hadda waa ay wajihi la’yihiin xaqiiqda ah in ay Trump ka caawiyeen in la doorto, iyaga oo siiyay fursad badan, waxa kale oo ay buunbuuniyeen arrintii emailadayda in ka badan saddex jeer intii ay hadal hayeen arrimaha muhiimka ah ee taabanaya nolosha dadka caadiga ah” ayaa lagu qoray buugga Clinton.
Laakiin xaqiiqda jirta ayaa ahayd in Trump uu ahaa musharax layaab leh oo meel iska dhigay wax kasta oo uu dhaqanka wanaagsan ahaa, saxaafadana waxa ay ku qasbanayd in ay tabiso waxyaabaha uu samaynayay ama oranayay ee xadka taloowsiisan.
Lahaanshaha sawirkaREUTERSImage captionClinton ayaa eedaysay Sanders iyo Obamad
“Weeraradiisa waxa ay ahaayeen kuwa yeeshay saamayn waarta, waxa ay adkaysay in aan mideyno xoogaga dimoqoraadiga, waxayna wadada u xaartay in Trump uu guulaysto” ayay buugga ku tiri Clinton oo ka hadlaysa Berni Sanders oo ahaa musharixii kula tartamay musharaxnimada xisbiga dimoqoraadiga dhexdiisa.
Waxa ay sheegtay in uu garaafeeyay shaqsiyaddeeda, in uu sameeyay balanqaadyo aanan macquul ahayn, islamarkaasina uu ka gaabsaday in uu ka hortago weeraradii ay iyada ku qaadayeen dadkii isaga la safnaa.
Clinton waxa ay farta ku fiiqday in Sanders uusan xubin ka ahayn xisbiga dimoqoraadiga, islamarkaasina uusan danaha xisbiga marnaba ka shaqaynaynin.
Sida lagu ogaaday aragti uruurin la sameeyay, illaa 12% ka mid ah taageerayaasha Sanders ayaa u codeeyay Trump, haddii codkaas ay siin lahaayeen Clinton waxa ay u suurtogalin lahayd in ay ku guuleysato gobolada Pennyslvania, Michigan iyo Wisconsis, kadibna u suurtogalin lahaa in ay
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionJill Stein waxa ay ka mid ahayd musharixiinta madaxtinimada Maraykanka
“Waxaa jiray dad u codeeyay Jill Stein oo ku filan in ay natiijada dhanka kale u weeciyaan in ka badan codadkii uu heley Ralph Nader sanadkii 2000” ayay buugga ku sheegtay Clinton oo ka hadlaysay haweenaydii u tartantay doorashadii madaxtinimada Maraykanka iyada oo ah musharax madax banaan.
Farqigii u dhaxeeyay Bush iyo Algore sanadkii 2000 waxa uu ahaa 537 cod oo kaliya, kaas oo jajab uun ka ahaa codadkii uu helay musharixii kale Ralph Nader oo gaarayay 97,488 cod.
Stein waxa ay heshey 1,457,216 cod, waana markii ugu horaysay ee xisbiga Green Party uu doorasho ka helo wax ka badan hal milyan , Haddii codadka Stein ay aadi lahaayeen dhanka Clinton , waxaa dhici lahayd in ay ku guulaysato Aqalka Cad.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionHillary Clinton waxa ay ahayd qofka kaliya kaliya ee dumarka ah ee ebed xisbiyada waaweyn ee Maraykanka musharax u noqota
“Waa in la qiraa, waxa dhacay 2016-ka waxa ay ahaayeen wax muujinaya in sinji takoor (dumar nacayb) uu qayb weyn ka qaatay, waxaana xaalka uga sii daray in musharax dumarka lid ku ah uu ku guulaystay doorashada” ayay tiri Clinton oo farta ku fiiqaysa in dumarnimadeeda darteed ay qeyb ka tahay in ay ku guuldaraysato doorashada madaxtinimada Maraykanka.
Clinton waxa ay noqotay haweenaydii ugu horaysay oo musharax madaxweynenimo u noqota mid ka mid ah xisbiyada waawayn, marar dhawr ah oo ay hadashayna waa ay cadaysay xaqiiqdan, inkasta oo marar kalana aysan soo hadal qaadin.
“Wuxuu ku guulaystay in uu rajo abuuro, islamarkaasina taabto waxyaabihii caddaanka ay tabanayeen, gaar ahaan malaayiin caddaanka ah oo cabasho ka qabay sida ay wax u socdaan” ayay tiri Clinton.
Clinton eedeymo badan ayay u haysaa Trump, waxaysa si gaar ah ugu sii eedeysay in uu nacayb dhexdhigay qoowmiyadaha ku wada nool Maraykanka, gaar ahaan uu kiciyay caddaanka xagjirka ah.
Eedeymaha Clinton waa kuwa wax ka jiri karaan, waxaana iska cad in Trump uu beerlaxawsaday dadka caddaanka ee shaqeeya, islamarkaasina kasbaday.
Hillary Clinton Lafteeda
“Waad eedeyn kartaa xogtii la xaday, fariimihii aan dirnay, wax kasta ayaad eedda dusha uga tuuri kartaa, laakiin ugu dambayn aniga ayaa ahaa musharaxa” ayay tiri Clinton oo nafteeda eedeysay.
Qeybo ka mid ah buugga ayay Clinton si faahfaahsan uga hadashay qaladaadkii iyada ka dhacay, waxaana ka mid ah hadalo ay ka sheegtay taageerayaasha Trump.
Waxa ay qirtay in ay dadka ku qancin waysay sidii looga soo kaban lahaa burburkii dhaqaale ee Maraykanka ku dhacay sanadkii 2008-dii.